कथाकारहरूको एक विस्तृत दायरामा जसले विश्व साहित्यको शैलीको रूपमा परी कथाको लागि मार्ग प्रशस्त गर्यो, चार्ल्स पेर्राल्ट, फ्रान्सेली कवि र लेखकले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान पाएका थिए। अब केहि मान्छे को ठेगाना हो कि चार्ल्स पेर्राल्ट, जसको जीवनी 17 औं शताब्दी को फ्रान्स को राजनैतिक जीवन संग निकटता संग जुडा छ, उनको युग को एक पुष्पनीय कविता को रूप मा मानिन्छ, फ्रांसीसी अकादमी को वैज्ञानिक परियोजनाहरुको प्रमुख थिए र त्यस पछि वित्त मंत्री जीन कोल्बर्ट को पहिलो अध्यक्षता थियो। तर संसारको प्रसिद्धि र पहिचान, विशेष गरी युवाहरू, उनीहरूलाई ती मोटो गम्भीर पुस्तकहरू द्वारा नचाहिएको थियो, तर अद्भुत सुन्दर परी कथाहरू: सिन्डेन्डेला, केटा-औं-औंला, कोटा जूता, ब्लू दाल्ड र लिटिल रेड राइडिङ हूडको बारेमा। चार्ल्स पेराल्टले जीवन र रचनात्मक बाटो कस्तो थियो? यस उल्लेखनीय लेखकको जीवनी तल प्रस्तुत गरिएको छ।
1628 मा, सबैभन्दा सानो छोरा चार्ल्स पेर्रल्ट पेरिस बौद्धिकहरूको ठूलो परिवारमा जन्मिएको थियो। इतिहासकार फिलिप आरेस अनुसार, यस केटाको जीवनी जसले आठ वर्षको उमेरमा कलेजमा प्रवेश गर्यो, यसको योग्यता एक उच्च उच्च विश्वासीको जीवनी भनिन्छ। प्रशिक्षणको सबै वर्ष चार्ल्सले शिक्षण रडहरूको साटो थिएनन - समयमा समय असाधारण थियो। कलेज छोडेर पछि, पेर्राल्ट तीन वर्षको कानुनी पाठ्यक्रममा जान्छ, स्नातक भएपछि, उनी एक वकीलको विशेषता प्राप्त गर्छन्। बीस-तीन वर्षमा, उहाँ आफ्नो गृहनगर फर्कनुहुन्छ, जहाँ उसले आफ्नो निजी कानून अभ्यास सुरु गर्छ। चार्ल्सका साहित्यिक अनुभवहरू एक समयमा पर्थ्यो जब उच्च समाजका प्रतिनिधिहरू बीच लोकगीतको लागि एक फेशन हो, विशेष गरी बालबालिकाको परिकारहरूको कथा। परी कथाहरू पढ्न र सुन्नु मात्र तोकिएको पत्ता लगाउनको लागि आधुनिक तुलसीको तुलनामा महत्व दिइएको थियो। यो बिना यो जान्छ कि लेखकहरूको एकदम ठूलो जो यस्तो अनुरोधहरू पूरा गर्न खोजेको छ। तिनीहरूमध्ये पेर्राल्ट थियो।
यसका जीवनी जीविका सहित लेखकले आफ्नो जीवनका दुर्लभ समीक्षामा उल्लेख गरेका पिताहरूको रूपमा उल्लेख गरेका छन्। चार्ल्स पेर्राल्ट, न्यायाधीश महानिर्देशक हुन, आफ्नो बच्चाहरु को भविष्य को व्यवस्था गर्न को लागी रोकियो। अनि, राजा लुइस एक्सवीको भतीजीमा आफ्नो अठारह वर्षीय छोरालाई परिचय दिन चाहानुहुन्छ, तिनले उनको असामान्य वरदानको लागि तयार पारेका थिए - परी कथाहरूसँग एक किताब। एक नोटबुक प्रस्तुत गर्न को लागी चार्ल्स द्वारा संकलित पहिलो शानदार कथाहरु पिएर Darmancourt पियरे Darmancourt, लेखक को छोरा द्वारा पाईने थियो। त्यसैले उनले उनको वास्तविक लेखकको नाममा हस्ताक्षर गरी लाइट देखाए। यसबाहेक, चार्ल्स पेर्राल्ट, जसको जीवनी देश र समाजको सामु महत्त्वपूर्ण गुणको साथ अनुचित भएको थियो, त्यो डरलाग्दो थियो कि "शानदार" मनोरञ्जनको व्यवसायले आफ्नो अख्तियारलाई गम्भीर साहित्यिक व्यक्तिको रूपमा छायामा पारेको थिएन।
आमा गोओको कथाहरू
पाठकहरूले कहिलेकाँही सिन्डेन्डेला र लिटिल रेड राइडिङ हाउको कथाका लेखक लेखक चार्ल्स पेर्राल्ट थिए? बच्चाहरु को लागि जीवनी, कथाकार को काम को बारे मा बता रहेको छ, र कुनै, जरूरी मा आफ्नो जीवन को अन्त मा प्रकाशित पुस्तक को एक सन्दर्भ मा "मां गोओ को दास्तां" संग एक संदर्भ समावेश गर्दछ। यो पनि उनको छोरा - पियरे को नाम ले हस्ताक्षर गरे। परी कथाहरु को यस संग्रह को अभूतपूर्व लोकप्रियता (मूल तीन पल्ट पुन: छापिएको थियो) समाज को सच्चा लेखक को बारे मा सत्य जानने को कारण को रूप मा सेवा गरे, जो वास्तव मा, पहिलो लेखक जो एक साहित्यिक कला को एक स्वतंत्र शैली को रूप मा एक बच्चाहरु को परी कथा को सडक खोलियो।
Turgenev, "पिता र सन्तान": समीक्षा। "बुबाहरू र छोराछोरीहरू": महत्त्वपूर्ण समीक्षाहरू
ए। Solzhenitsyn को काम "द गुलाब आर्चिपेलगो"। सारांश
जोसेफ कन्नराद: जीवनी र उत्कृष्ट काम गर्दछ
Moth। राष्ट्रियता र संक्षिप्त जीवनी
यूरी Krasnozhan। प्रसिद्ध रूसी कोच सबै मजा
कसरी एक स्नान लागि झाडू बुनना हामीलाई भन्नुहोस्
आफ्नो हातले उपनगरीय क्षेत्र भूदृश्य
Amal Alamuddin उमेर, पेसा र विवाह